Arday Soomaaliyeed oo waxbarasho u tegey dalka Qubrus oo xabsiyada la dhigay |
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo u tegey dalka Qubrus inay wax ka bartaan jaamacado halkaa ku yaal ayaa lagu xiray jasiiradda Qubrus. Ardaydan ayaa waxa ay sheegeen in fursad waxbarasho ah ay ka heleen jaamacad ku taal jasiirada Qubrus kadib markii ay la xiriireen oo ay bixiyeen qarashkii loogaga baahnaa balse maamulka ka jira Jasiirada ayaa u diiday ardaydaas Soomaaliyeed inay wax ka bartaan jasiirada.
Nasro Yuusuf Xasan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee lagu xiray Quburus ayaa u sheegtay in ay yihiin 20 ruux oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuna xiranyihiin xabsi ku dhex yaalla garoonka wadankaasi.
Ardaydaan ayaa ka kala baxay magaalooyinka kala ah Muqdisho iyo Hargeysa, waxaana 5 ka mid ah ay yihiin Dumar, halka 15-ka kale ay rag yihiin.
Nasro ayaa tilmaantay markii ay garoonka kasoo degeen in ay qabteen ciidamada Booliiska, islamarkaana loo sheegay in dalka aysan geli karin illaa madaxda Jaamacadda ay u socdaan ay halkaasi tagaan. Sidoo kale Nasro ayaa sheegtay in dhanka raashiinka ay dhib ku qabaan islamarkaana loo sheegay in dalkooda dib loogu soo celin doono.
Ardaydan ayaa waxa ay ka codsadeen dowladda Federaalka Soomaaliya in degdeg ay xiriir kula soo sameeyeen madaxda Qubrus, islamarkaana hadii dalkooda loo soo celinayo ay helaan lacagtooda, ama waxbarashadii ay u baxeen loo fududeeyo.
Boqolaal arday Soomaaliyeed ah ayaa wax kabarata jaamacado ku yaal dalalka caalamka, waxana ay ardaydan yihiin kuwo waxbarasho doonayo halka dhalinyaro kale ay badaha isugu shubaan sidii ay ku geli lahaayeen dalalka qaarada Yurub.
Next post Hab-nololleedka Dalka Noorway (Norway)
Previous post Boqolkiiba 30 shacabka Maraykanka oo aaminsan in Obama uu yahay Muslim